Baidoa Media Center » Muqdisho iyo Madaxdii Dhaqanka. Maqaal aad u xiiso badan.
Muqdisho iyo Madaxdii Dhaqanka. Maqaal aad u xiiso badan.
May 10, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Waxaa caasimadda Muqdisho ka furmay shirkii hogaamiye dhaqameedka Soomaaliyeed ee ka kala socda deegaamada iyo beelaha Soomaaliyeed ee 4.5. Muddo ayaa la soo xulayey muddona waa la soo daadguraynayayey haddana waxay billaabeen Dugsigii Barashada Dastuurka, nidaam wadaagga, maamul wanaagga iyo awood qaybsiga. Haddaba aqristoow bal aan kaaga sheekeeyo meesha sidii wax uga dhaceen.
Waxaa soo degay Imaamyo, Salaadiin, Isimmo, Garaadyo, Ugaasyo, Malaaqyo, Wabarro, Boqoro. Magacyadani idinkuma cusba aad baa loo qadariyaa. Sheeko yaroo oo dhex martay golayaashii dhaqanka, dadkii dalbaday iyo qaabka shaqadu ku socoto ayaan idiinka sheekaynayaa ee bogasho wacan:
Suldaan Colujoog: Anigaa kuu sheegaya Garaad, ee mid walba weydii haddii uu ku yidhaahdo magaciisa sadex Isim oo is dabayaal waa original, haddii uu Suldaan hebel hebel hebel ku yidhaahdo, oo kuwa kale aysan Suldaamo iyo Garaadyo iyo Imaamyo ahayn ama Malaaq Malaaq dhalay uusan ahayn waa koobi maya, waaba bug [Falso] oo inagaa laynagu xumaynayaa.
Suldaankii khadkaa ka go’ay shakina waa galay, ka dib ayaa mid kale weydiiyey; yaa kula soo hadlayey? Waxuu yidhi ; waa mid yaroo walaalkay dhalay oo dibadahaa jira, ninka reerka oo dhan iga kafaala qaaday, wuxuu barta Qaynuunka iyo Sharciyada, waxuu igu yidhi; hawsha aad waddaan waa Qatar! Waan shakiyey Malaaq Tuuroow Malaaq tuure : Aniga saaxiib hore ayaan u shakisnaa, hadda aniga dadka aan soo xulaayo dad aan sharci aqoon ma keenayo 9 Abuukaate [Qareen] ayaan beesha ku jira, sagaalkaba waa keenaa, haddii ay dadka dhib u horseedaan, Ilaahay ayaa la xisaabtamayaa, waxaan ku dhihi lahaa wiilka hadduu sharciyada barto Asiga wac iyo kuwa kale ee yaqaan, sidaas ayaan dalka ku badbaadin karnaa, waxaana lagu kala ogaan karaa.
FG: qormadu waxay u gaartahay qoraaga soo qoray.